Axe Trading for Cryptotrading - Blockchain News
Laga yaabaa 10, 2018 admin
Sidee Axe shaqeeyaan cryptotrading?
Axe jira foomka of software, taas oo, xaaladaha inta ugu badan, si toos ah ula shaqaysa crypto-is-weydaarsiga iyada oo interface barnaamijka (API). Ujeedada Axe waa in ay si toos ah u qabtaan xawaalad la hantida: Tan awgeed, Axe sameeyo falanqayn faahfaahsan macluumaad suuqa iyo, oo ku salaysan xogta la helay, go'aan xawaalad Gaba. Iyada oo ku xidhan istaraatijiyad la doortay, dhigay oo xuduudaheedu iyo hadaf, ganacsade dooran kartaa mid ka mid ah afarta nooc ee Axe:
Axe Trading falanqaynta macluumaadka ka crypto-sarrifka helay, iyo go'aannada ku saabsan gadashada iyo iibinta cryptocurrency ku salaysan xadka by ganacsade la doortay. Noocan ah Axe laga beddeli karaa in mar dhowr beegyada uu shaqeeyo, ama waxaad isticmaali kartaa xeelado sanyihiin in ay ahaayeen ee ay soo falanqeeyayaasha.
Axe Arbitrage socdo isbedel ku sheegyada ee Cryptocurrency on dhaafsi kala duwan oo si toos ah u sameeyaan xawaalad si ay uga kala duwan yihiin qiimaha helo faa'iido.
Axe Custom, ama Axe si, waxaa loo isticmaalaa si ay u sameeyaan xawaalad la koobin sanyihiin in ay yihiin soo galay gacanta ama lagu doorto in hab automatic.
script robots jira foomka of software aasaasiga ah, ku salaysan kuwaas oo ganacsade madax banaan reserved kartaa shaqo ee robot ah. Waxaa loo adeegsaday by ganacsatada khibrad ciddii wax garan diiniga ah ganacsi on Suuqa Crypto.
Halista in Trading Axe on Suuqa Crypto
software haleysan: ma dhammaan Axe hadda la heli karo ayaa la bilaabay kooxda ka mid ah horumarinta xirfadeed iyo ganacsatada khibrad crypto. Waxaa intaa dheer, robot ah, kuwaas oo code qalad waxaa laga sameeyey, laga yaabaa in aanay xaq ugu noqon karaa hawlqabad la'aan, laakiin sidoo kale waxay keeni khasaare dhaqaale oo muhiim ah, gaar ahaan isku dhafan oo istaraatijiyad liidata doortay. Sidaa darteed, waayo Ganacsi waxaa haboon doorashada Axe la xaqiijiyay kaliya la sumcad la isku hallayn karo oo tiro balaadhan oo ah qalabka.
burburkii degdeg ah cryptocurrency ah: cryptocurrencies waa hanti aad u kacsan, ma caymiska duma. Sidaas, in June 2017, at sarrifka GDAX ah, iyada oo sababtu tahay heshiis weyn, qiimaha hawada hoos uga $ 319 si ay u 10 cents. Sidaas darteed, ganacsatada kuwaas oo aan xuduud stop-khasaaro, in xoogaa ilbiriqsiyo ah, khasaare weyn soo gaaray. Arrintan la xiriira, Ganacsatada qaar ka mid ah ayaa kalsooni ku qabta in Axe waa in ay ka shaqeeyaan oo kaliya xaaladaha caadiga ah awood iyo ganacsade ah oo soo maray si sax ah la saadaaliyo xaaladda suuqa.
khayaanada: suuqa sharciyeysneyn, Xaaladaha cryptocurrency musuqmaasuq ka dhacaan marar badan, iyo Axe ka shaqeeya waa laga reebo lahayn. Bishii December 2017, robot ah fadeexad Hexabo si firfircoon uga shaqeeya suuqa, xanibeen lacag ay user ee, xannibo soo saarka ee lacagta crypto, ka dibna joojiyay shaqada, ineey oo dhan lacag u horumarinta ee madal diraya. Sidoo kale, sida uu sheegay mid ka mid ah ganacsade, waa inaad ka fogaataa Axe free caan, maxaa yeelay, iyaga waxaad kala soo bixi kartaa software xaasidnimo ah, ujeedada taas oo ah in ay helaan furayaasha boorsada gaar ah ama isticmaal Guntin ganacsade ee macdanta.
Axe caan ah oo Cryptotrading
3hakadka waa robot caan bixiyo cryptotrading iswada, oo ka shaqeeya la is dhaafsi sida Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi iyo YOBIT. Waxay bixisaa xulashada weyn oo xilal kala duwan in dadka isticmaala dooran kartaa in ay maal-gashadaan ama ay u isticmaalaan sidii qalab gorfaynta si ay ula socdaan xaaladda suuqa. Waxay bixisaa in loo isticmaalo isku mar ah oo amar stop-khasaare iyo faa'iido-qaataan. Waxay leedahay afar heer Times – “Bilowga” waayo, $ 30, “Trading” waayo, $ 50, “Professional” waayo, $ 100, iyo sidoo kale “Individual” heshiis.
Cryptohopper waa robot daruur ku salaysan bixisay in shaqeyn doonaan xitaa haddii computer ganacsade ee waa offline ama off. Ganacsatada khibrad madax banaan astaysto shuqulka robot ah, halka bilowga isticmaali kartaa heli karo “autopilot”. robot ayaa sidoo kale kala dhig dhigi karaa oo loo xaqiijiyo waxtarka calaamadaha nidaamka ganacsi sameeyey ee la soo dhaafay (backtest), ayaa isku geynta Stop Loss gacanta si a, iyo si toos ah ku ganacsan kartaa dhowr is-weydaarsiga. Waxay leedahay saddex nooc oo Times bil kasta – waayo, $ 19, $ 49 iyo $ 99. Falanqaynta A faahfaahsan oo dheeraad ah oo ah madal ka heli kartaa halkaan.
Cryptotrader waa mid ka mid ah cryptobots daruur ugu caan ah oo ganacsi. Taageerada tiro badan oo ah crypto-lacagaha iyo is-weydaarsiga. Waa in si buuxda kartoo by user. Waxay bixisaa backtesting iyo hawlaha suuqa istiraatiiji ah, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u ganacsadaan xeeladaha. Waxay leedahay shan heer oo Times bil kasta: waayo, 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC iyo 0.0214 BTC.
Haasbot waa boosteejo ah oo ganacsi iswada, loogu tala galay, ugu horreeya oo dhan, waayo, khibrad Seeraar-ganacsatada. Isticmaala xeelado oo ka soo jeeda xogta falanqaynta farsamo. robot Tani waxaa la bixiyaa oo uu leeyahay saddex heer oo Times sanadlaha: liisanka “Billowga” waayo, 0.073 BTC, “Simple” waayo, 0.127 BTC iyo “Extended” liisanka, taas oo kharashka 0.208 BTC. Iyadoo ku xiran shatiga iibsaday, users reserved kartaa dhowr Axe xiran in ay awoodaan in ay qabtaan tiro ka mid ah hawlaha kala duwan waxay noqon doontaa.
Gekko waa robot il free furan in lagala soo bixi karaa in GitHub. Waa sahlan oo ku filan si ay u isticmaalaan, leeyahay tilmaamaha tallaabo-tallaabo ku faahfaahsan in faa'iido badan ee ganacsatada u hureen noqon doonaa. Miyuu interface ku haboon, backtest kartaa xeeladaha iyo arki natiijada ganacsiga. Waxaa intaa dheer, software ama robot ah waddaa on nidaamyada hawlgalka ugu.
Zenbot waa robot kale il furan ee ganacsatada Seeraar. users robot The kala soo bixi kartaa code oo ay ka dhigi beddelka in ay shaqada, oo ay isku geynta ayaa diyaar u ah hababka ugu muhiimsan ee hawlgalka. Oo, ka duwan Gekko, Zenbot samayn kartaa xawaalad ee hirka sare iyo codsan fursado arbitrage. Si kastaba ha ahaatee, in bulshada crypto waxaa la sheegay in robot aan la updated muddo dheer, oo sidaas daraaddeed ma laha fursad in la is dhaafsi caan cusub shaqeeyaan.
Axe for Cryptotrading
Post Previous:Blockchain News 10.05.2018
Post Next:Blockchain News 11.05.2018